Author Topic: Today's News from Nepal (आजको समाचार) (Read 12447 times)
« Reply #20 on: March 17, 2015, 04:05:29 AM »
एसएससीमा चिट चोरे रेस्ट्रिकेट
काठमाडौं,चैत २ - यही ५ चैतबाट देशभर हुन लागेको एसएलसीअन्तर्गत काठमाडौंमा हुने परीक्षामा कडा अनुगमन गरिने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार ५ । देशकै सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी रहेको काठमाडौंमा एसएलसीलाई व्यवस्थित,अनुशासित र सफल बनाउन सबै प्रकारका तयारी पूरा भएको एसएलसी तयारी जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।
जापानमा शरणार्थीको हैसियत माग्ने नेपाली ह्वात्तै बढे
काठमाडौं चैत २ - स्वदेशमा बस्न सक्ने स्थिति नरहेको झुटो व्यहोरा पेस गर्दै जापानमा शरणार्थीको हैसियत माग गर्ने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। जापान पुगेर शरणार्थीको हैसियत माग गर्ने विदेशीमध्ये नेपालीको संख्या एक चौथाइ छ। जापानको न्याय मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको सन् २०१४ को प्रतिवेदनमा जापानमा सबैभन्दा बढी शरणार्थीको हैसियत माग गर्ने नेपाली रहेको उल्लेख छ। नागरिक दैनिकम समाचार छ ।
भारतबाट मानिस झिकाएर आफ्नै पतिको हत्या
काठमाडाै‌ चैत २ - विराटनगर १९ की सुशीला साहले भारतबाट मानिस झिकाएर आफ्नै पतिको हत्या गरेको खुलेको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
आन्दोलनले वार्ता बिथोलिन्छ : सत्तापक्ष
काठमाडौ, चैत २ - प्रमुख सत्तारुढ दलहरू काग्रेस र एमालेले विपक्षी मोर्चाको आन्दोलन घोषणाप्रति आपत्ति जनाउदै यसले संविधान निर्माणको वातावरण विथोल्ने बताएका छन् । वार्ता र संवादको प्रक्रिया चलिरहेका बेला त्यसलाई लत्याउदै आम हड्ताल समेतका कार्यक्रम अघि सार्नुले उनीहरु संविधान निर्माणमा इमानदार नभएको विष्लेषण सत्तारुढ दलको छ । अब संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाइहाल्नुपर्ने अडान उनीहरुको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सीइओ पद तीन महिना बढी खाली नहुने
काठमाडौ, चैत २ - तीन वाणिज्य बैंक सहित राष्ट्रियस्तरका ४ विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पदमा जागिरको अवसर जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रका अनुसार यी संस्था सहित प्रमुख कार्यकारी पद खाली रहेका अन्य बैंक वित्तिय संस्थाले पनि तीन महिना भित्र उक्त पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
मापसे गरी बालिकालाई चकलेट दिइ बलात्कार गर्ने रंगेहात पक्राउ
भक्तपुर, चैत २ - नौ बषिर्या बालिकालाई बलात्कार गर्ने काभ्रे-४ पनौती घरभई हाल अनन्तेश्वर नगरपालिका-१५ गुण्डु बस्ने १९ वषिर्य बाबा तामाङ्ग रंगेहात पक्राउ परेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
दुई महिनापछि लेखा समिति बैठक
काठमाडौ, चैत २ - दुई महिनादेखि अडकिएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतवार बसेको बैठकमा चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणदेखि महालेखाले औंल्याएको बेरुजुबारे सभासदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । एमाओवादीसहितका विपक्षी मोर्चाले बहिस्कार गरेका कारण बैठक हुन नसकी आर्थिक अनियमितताबारे छानवीन हुन सकेको थिएन । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
दुई माओवादी पार्टी एकताका लागि कस्सिए
काठमाडौ, चैत २ - पार्टी विभाजनको दुई वर्ष आठ महिनापछि दुई माओवादी पार्टी एकताका लागि कस्सिएका छन् । एमाओवादी र उसैबाट फुटेको नेकपा-माओवादीले एकताका लागि वार्ता गर्न आइतबार उच्चस्तरीय समिति बनाएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले के भने
काठमाडौ, चैत २ - प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताको क्रममा हुने उतार चढावबाट विचलित नभई वार्ताको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर संबिधान निर्माणको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
कामदारको एमआरपी मुस्किल
काठमाडौ, चैत २ - विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले पासपोर्ट राखिदिएकाले झन्डै डेढ लाख नेपाली कामदारले तोकिएको समयमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का अनुसार आउँदो २०७२ मंसिर ८ भित्र सबै हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरी एमआरपी बनाइसक्नुपर्ने छ । त्यो समयभित्र एमआरपी नबनाए कामदार कार्यरत मुलुकमै अवैध भई समस्यामा पर्न सक्छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
मापसे गरे ५० हजार जरिवाना, अनिवार्य जेल
काठमाडौं चैत २ - सरकारले मादक तथा अन्य नशालु पदार्थ प्रयोग गरी सवारी चलाउनेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, अनिवार्य कैद र लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको छ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
« Reply #21 on: March 18, 2015, 07:00:33 AM »
वन बाँड्दै सरकार
काठमाडौं चैत ४ - सरकारले विभिन्न बहानामा १३ हजारभन्दा बढी वन क्षेत्र वितरण गरेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका वन क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, टेलिफोन टावर तथा सुरक्षा निकायका नाममा हरेक वर्ष वितरण भइरहेको छ। यस वर्षमात्रै एक हजार हेक्टर वन क्षेत्र वितरण भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
'जनताले सोध्छन्, बैठक कहिले बस्छ?'
काठमाडौं चैत ४ - संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभाको अबको प्रक्रियाका बारेमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। वार्ता छाडेर आन्दोलनमा लागेका मोर्चा र सरकारमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान निर्माण प्रक्रियाका विषयमा 'सीधा' प्रश्न गर्ने तयारी गरेका छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सेयर बाँडदै एनसेल
काठमाडौं, चैत ४ - निजी क्षेत्रको दुरुसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने भएको छ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
फेरि सक्रिय भए राजधानीमा गुन्डा नाइके
काठमाडौं,फागुन ४ - डन दिनेश अधिकारी ‘चरी’ प्रहरीसँग मुठभेडमा मारिएपछि कम भएको गुन्डागर्दी फेरि मौलाउन थालेको छ । सक्रिय हुन थालेको सूचना पाएपछि प्रहरीले गुन्डाविरुद्द अपरेसन सुरु गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सात महिनामा १४ अर्बको चाँदी
काठमाडौं चैत ४ - सुन आयातमा सरकारले कडाइ गरेपछि चाँदीको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। राष्ट्रबैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा १४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको चाँदी आयात भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
'कात्तिकसम्‍म कोइराला नै'
काठमाडौं चैत ४ - प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट कात्तिकस म सरकारमा समर्थन जनाउने सुनिश्चितता आएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उनको पुच्छर बनेको आरोप लगाएका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सेना र प्रहरीको पम्पमा सिल
काठमाडौं, चैत ४ - कम परिमाणमा इन्धन वितरण गरेको पाइएपछि सेना र प्रहरीले संचालन गरेका दुई पम्प सिल गरिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
२० हजार टन ग्यास भण्डार गरिने
काठमाडौ, चैत ४ - बिगतमा देखिएको ग्यास अभाव हटाउन सरकारले २० हजार टन ग्यास भण्डार गर्ने भएको छ । जाडो महिनामा ग्यासको माग बढ्ने र सोही मौकामा केही व्यवसायीले कालोबजारी गरेर चरम अभाव गराउने प्रवृती बढेकाले सरकार आफै भण्डार गर्न लागेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
चीनबाट हालसम्मकै ठूलो लगानी आउँदै
काठमाडौ, चैत ४ - चीनीयाँ लगानीकर्ताकातर्फबाट अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी आउने भएको छ । चीनको दसौं ठूलो सिमेन्ट उत्पादक होङसी ग्रुपले नेपालमा अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी भित्राउन लागेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
शान्ति प्रक्रिया भंग गर्ने बाटोमा सत्तापक्ष - पुष्पकमल
काठमाडौ, चैत ४ - एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया भंग गर्ने बाटोमा सत्तापक्ष लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले विगतमा भएका सहमतिविपरीत सत्तापक्ष गएको उल्लेख गर्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन् । युद्धमा भएका घटनामा आममाफी दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले शान्ति प्रक्रिया भंग गर्ने दिशातर्फ लगेको टिप्पणीसमेत उनको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
संवाद गराउँदै सभामुख
काठमाडौ, चैत ४ - प्रक्रिया र आन्दोलनको दुईतर्फी बाटोमा लागेका सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चालाई एकै ठाउँमा राखेर सहमति जुटाउन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पहल गरेका छन् । लगातार दुई दिन प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलमा जुटेका सभाध्यक्षले बुधबार दिउँसो प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई चाँडो निकास गर्न आग्रह गर्ने भएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
कामदारबारे बुझ्न संसदीय टोली मलेसियामा
क्वालालम्पुर, चैत ४ - संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र मलेसियास्थित नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच सोमबार अन्तर्क्रिया भएको छ । सभापति प्रभु शाहको नेतृत्वमा आएको टोलीलाई मलेसिया सरकारसँग यथासक्य चांडो श्रम सम्झौताका लागि पहल थाल्न सुझाव दिएको छ ।
जेलबाट छुटेपछि फेरि युवती तस्करीमै संलग्न
काठमाडौ, चैत ४ - नेपाली युवतीलाई अफ्रिकी र खाडी मुलुकका डान्सबारमा काम लगाउने भन्दै त्यहाँ पुर्‍याएर यौन शोषण गराउने एक गिरोहमा संलग्न एक भारतीयसहित ७ जना पक्राउ परेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमन समाचार छ ।
नक्कलीले अंश लिए सक्कलीको बेहाल
गोरखा, चैत ३ - आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ गोरखा मनकामनाका मानबहादुर थापा वेपत्ता भएको ३० वर्षपछि घर फर्किए ।
प्रचण्डले भने - ज्ञानेन्द्रभन्दा कांग्रेस एमाले बलिया
काठमाडौं चैत ३ - एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा अहिलेका कांग्रेस, एमाले शक्तिशाली भएको बताएका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
रोम विधान अनुमोदन छिट्टै
काठमाडौं चैत्त ३ - मानवअधिकारकर्मीले आवाज उठाएको लामो समयपछि सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण र कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले मन्त्रीपरिषदले अध्ययन समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा विधान अनुमोदन हुने बताए। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौंका डान्सबारबाट अफ्रिकामा बेचिदैँ युवती
काठमाडौं चैत ३ - काठमाडौंको डान्सबार तथा मसाज सेन्टरमा काम गर्ने युवतीलाई अफ्रिका लगेर बिक्री गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं-तराई द्रूतमार्ग डीपीआरमा समझदारी
काठमाडौ, चैत ३ - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र इन्फ्रास्टकचर लिजिङ एण्ड फाइनान्सिङ सर्भिस लिमिटेड (आईएल एण्ड एफएस) बीच काठमाडौं- तराई द्रूतमार्ग निर्माणका लागि डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यससँगै बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना बन्ने संभावना बढेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
नातिनी बलात्कार गरेको ठहरिएपछि बयोबृद्धलाई ११ बर्ष कैद
दोलखा, चैत ३ - १० बर्षीया नातिनीलाई बलात्कार गरेको ठहरिएपछि एक बयोबृद्धले ११ बर्ष कैद ताेकिएकाे छ । माघ महिनाको एक अपरान्ह आफ्नै नातिनीलाई कोठामा लगेर करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले सुनखानी गाविस- ४ का ८२ बर्षीय बृद्धलाई कैद र नगद जरिवानाको सजाय गरेको छ ।
अमेरिकामा मन्त्री केसीले प्रहरी बोलाउँछु भनेपछि
न्युर्योक, चैत्र ३ - महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री निलम केसी र त्यहाँ बस्दै अाएका नेपाली महिला बीच दोहोरो नागरिकताको विषय उठेपछि घम्साघम्सी भएको छ । स्थानीय महिलाको आयोजनामा न्युर्योकमा गरिएको एक भेटघाट कार्यक्रममा बिदेशमा बसेका नेपालीले आफ्नो नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएपछि मन्त्री केसी आक्रोसित भएकी हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
आन्दोलन घोषणाले स्तब्ध - सभामुख
काठमाडौ, चैत ३ - सभामुख सुवास नेम्वाङले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलसहितका विपक्षीले थप आन्दोलनको घोषणा गरेकामा आफू स्तब्ध र दुखी भएको बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
संवैधानिक पदाधिकारीको सुनुवाइ भाेलि
काठमाडौ, चैत ३ - संवैधानिक परिषद्ले दुई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरूको सुनुवाई बुधबारदेखि हुने भएको छ । व्यवस्थापिका-संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनवाई विशेष समितिको सोमबारको बैठकले लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गरिएका अध्यक्ष र सदस्यविरुद्ध उजुरीको सुनवाइ बुधबार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
« Reply #22 on: March 19, 2015, 08:38:42 AM »
यसकारण नेपाली कामदार इजरालय जानबाट बञ्चित
काठमाडौं, चैत ५ - नेपाली कामदार लिन इजरायल तयार भए पनि दुई देशबीच मोडालिटीमा सहमति हुन नसक्दा कामदार जानबाट बञ्चित भएका छन्। कामदार लिने र पठाउने विषयमा ६ महिनाअघि नै सहमति भए पनि कसरी पठाउँने भनेर मोडालिटीमा अहिलेसम्म सहमतिमा पुग्न नसक्दा जाने प्रतिक्षाम...
हामी त एसएलसीमा पास हुन्छौं तर प्रहरी र प्रशासन भने कहिले पास हुन्छ?
अस्पताल शय्याछेउ सानो र्‍याकमा माथिल्लो खण्डभरि औषधि, ब्यान्डेज र अरु खिद्रिमिद्री सामग्री छन्। तल्लो खण्डमा किताब-कापी। संगीता पुलामी मगरलाई हरेक पल ती किताब- कापीले आफूतिर तानिरहन्छन् । उनी चाहन्छिन्-जर्‍याकजुरुक उठूँ, पाना पल्टाउँ र र पढ्न थालूँ, बिहीबार सुरु हुने एसएलसी परीक्षाका निम्ति। आजको नागरिकमा रूवी रौनियारले खबर लेखेकी छन्।
विखण्डनको राजनीति मान्‍दिनँः ओली
विखण्डनको राजनीति मान्‍दिनँः ओली काठमाडौं, चैत ५ - के मुलुकको राजनीति बालकोट धाउन थालेको हो? 'हैन, इस्यु बल्खुबाट पैदा हुन्छन् र बल्खुको प्रमुख सञ्चालक बालकोटमा बस्छ। तर उपयुक्त दृष्टिकोण र अडान बल्खुबाटै निसृत हुन्छ।' बालकोटस्थित निवासमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, 'म बिरामी छु, कसैले ड्याम्म मारे अर्कै कुरा हो तर जिउँदो छँदासम्म ओलीले जातीयता र साम्प्रदायिकतामा आधारित राजनीति र संघीयतालाई अनुमोदन गर्न सक्दैन।'
अब मेडिकल कलेजबाटै जिल्ला अस्पताल विशेषज्ञ सेवा
काठमाडौं,चैत ५ - सरकारी दरबन्दीका एमबिबिएस डाक्टर नगएर सेवा प्रभावित भएका जिल्ला अस्पतालमा अब विशेषज्ञ सेवा सुरु हुने भएको छ । सरकारको प्रविधि र मेडिकल कलेजको जनशक्तिबाट जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा दिन लागेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
तामाकोसीको सेयर किन्न थप सहज
काठमाडौं, चैत ५ - माथिल्लो तामाकोसीको सेयर खरिद गर्न दोलखाबासीलाई थप सहज भएको छ। जलविद्युत कम्पनी ले स्थानीयकाका लागि छुट्याएको सेयरमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिएको ५० हजार रूपैयाँसम्म ऋणलाई विपन्न बर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइने भएपछि दोलखाबासीलाई थप सहज भएको खबर आजको राजधानीमा छापिएको छ।
कोरिया पठाउने पानीजहाज परिचयपत्र नै नक्कली
दक्षिण कोरियाको पानीजहाज कम्पनीमा काम गर्न पठाइदिने भन्दै ठगी गरेका दलालहरूले कामदारको सिमेन रेकर्ड बुक (जहाजमा काम गर्दा बोक्नुपर्ने परिचयपत्र) नै नक्कली बनाएको भेटिएको छ। पानीजहाजमा काम गर्ने कामदारले सिमेन रेकर्ड बुक अनिवार्य बोक्नुपर्छ। आजको अन्नपूर्णमा सम्भु कट्टेले खबर लेखेका छन्।
छोरालाई नागरिकता दिलाउन पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद
हेटौडा, चैत ५ - मकवानपुरकी एक महिलाले छोरालाई नागरिकता दिलाउन पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्नुपरेको छ। हेटौंडा–९ की इन्दुकुमारी थापाले छोरा लक्की शर्मालाई नागरिकता दिलाउन पति रामलाल शर्मासँग सम्बन्ध बिच्छेद नै गर्नुपरेको खबर आजको नेपाल समाचार पत्रमा छापिएको छ।
एसएलसीमा ‘मुस्कानसहित स्वागत’
सुर्खेत, चैत ५ - सुर्खेत-एसएलसी दिँदै हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने निर्धक्कसाथ परीक्षाकेन्द्रमा जानुहोस्। तपाईंलाई स्वागत गर्न केन्द्राध्यक्षदेखि अन्य कर्मचारी मुस्कानसहित गेटमै उपस्थित हुनेछन्। ‘फलामेद्वार'का नाममा वर्षौंदेखि हाउगुजी बन्दै आएको एसए...
मोहन बैद्य पत्नी पनि एसएलसी दिँदै
मोहन बैद्य पत्नी पनि एसएलसी दिँदै काठमाडौं, चैत ५ - माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य (किरण) की पत्नी सुष्मा वैद्य विहिबारदेखि शुरु हुने एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुँदैछिन्। ५२ वर्षको उमेरमा नयाँ वसपार्कस्थित प्रेरणा महिला विद्यालयमा भर्ना भएर उनले औपचारिक शिक्षाको शुरुवात गरेकी थिइन्। विद्यालय भर्ना भएर पढ्न शुरु गरेको ६ वर्षमै उनी एसएलसी दिन सक्षम भएकी हुन्। उनी अहिले ५८ वर्षकी भएको बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापिएको छ।
सिडिओ सरूवामा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप
काठमाडौं, चैत ५ - उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सरूवाको निर्णय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको हस्तक्षेपपछि २४ घन्टा नबित्दै उल्टिएको छ। गृह मन्त्रालयले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ३ फागुनमा विभिन्न २८ सिडियओको पदस्थापन तथा सरूवा गरिएको थियो।
सम्बन्धन निर्णय गर्न फ्याकल्टी बोर्ड आज
काठमाडौं, चैत ५ - त्रिवि पदाधिकारीले ‘चोरबाटो' बाट सम्बन्धन खोल्ने प्रयासस्वरूप १७ महिनाअघि तयार पारेको चार मेडिकल कलेजसम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनबारे अन्तिम निर्णय गर्न चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) फ्याकल्टी बोर्ड बैठक बिहीबार (आज) बस्ने खबर नागरिक दैनिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन्।
« Reply #23 on: March 20, 2015, 08:39:33 AM »
यसकारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
काठमाडौं चैत ६ - सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेबापत नेपालले एक लाख डलर एक करोड नेपाली रुपैयाँ को अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
बालबालिकालाई म्याद नाघेको खाद्यान्नदेखि मसला, विस्कुट र चाउचाउ
काठमाडौं चैत ६ - अनाथ र असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्ने भनी अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको बालगृहले नै बालबालिकालाई अस्वस्थकर खाद्य पदार्थ खुवाउँदै आएको भेटिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नीतिगत परिवर्तन हुन्छ - चिरञ्जीवी
काठमाडौं चैत ६ - सरकारले एक महिनादेखि जारी अनिश्चितता अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाललाई बिहीबार राष्ट्रबैंकको १६ औं गभर्नर नियुक्त गरेको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ । निवर्तमान गभर्नर युवराज खतिवडाको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गर्ने स्वभावप्रति असहमति राख्दै आएका नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गर्ने पक्षमा छैनन्।
मिलेर संविधान बनाउन चीनको सुझाव
हङकङ चैत ६ - नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूबीच संविधान निर्माणमा सहमति जटिल बन्दै गइरहेको बेला चीनले मिलेर संविधान बनाउन फेरि आग्रह गरेको छ। बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग बेइजिङमा भएको भेटमा चीनका उपराष्ट्रपति ली युनचाओले जातीय एकता सुदृढ हुने गरी मिलेर संविधान बनाउन नेपालका पार्टीहरूलाई सुझाव दिए। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
'लाइफलाइन' रोके अपराध मुद्दा
काठमाडाैं चैत ६ - एमाओवादीले चैत ८ देखि घोषणा गरेको आन्दोलनमा राजधानीको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउने योजना रहेको ठहर गर्दै उच्च सुरक्षा बैठकले 'लाइफ लाइन' रोक्नेमाथि भविष्यसम्मै असर पुर्‍याउने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
शरीरमा एक्कासि अक्सिजनको मात्रा घटेपछि प्रधानमन्त्री अस्वस्थ
काठमाडौं चैत ६ - प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला शरीरमा एक्कासि अक्सिजनको मात्रा घटेपछि अस्वस्थ भएका छन्। केही दिनदेखि रुघाखोकीले च्यापेका कोइरालाको रगतमा अक्सिजनको मात्रा हुनुपर्नेभन्दा कम पाइएपछि उनले कृत्रिम अक्सिजन लिन थालेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
६० करोडको योजना कार्यकर्तालाई
काठमाडौं चैत ६ - स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनसहभागितामूलक योजनाका नाममा ६० करोड रुपैयाँका योजना सत्तारुढ सभासद तथा उनीहरुले सिफारिस गरेका कार्यकर्तालाई बाड्ने तयारी गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
दस औंला जोडेर भन्छु संविधान बनाउनुस्
चितवन, चैत ६ - राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान बनेको हेर्ने जनचाहना पूरा गर्न दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
आईओएमले सम्बन्धन नदिने
काठमाडौं, चैत ६ - चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमको फ्याकल्टी बोर्ड बैठकले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
युवराज खतिवडा अन्तिम दिनसम्म कार्यालयमा
काठमाडाैं चैत ६ - गर्भनरका रुपमा कार्यकालको अन्तिम दिन पनि युवराज खतिवडा गर्भनरका रुपमा कार्यकालको अन्तिम दिन पनि युवराज खतिवडा केन्द्रीय बैंकमै देखिए । योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद भन्दा ५ तह तल झरेर राष्ट्र बैंक छिरेका उनले सीमित कर्मचारी विच आफ्नो कार्यकालको समिक्षा गरे । 'आफ्नो कार्यकालमा भएका काम, सफलता र बाकी रहेका विषयमा बोल्नु भयो' प्रवक्ता मिन बहादुर श्रेष्ठले भने । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
स्वाइन फ्लुबाट फेरि एक महिलाकाे मृत्यु
काठमाडौं, चैत ६ - स्वाइन फ्लु संक्रमण भइ ग्रिनसिटी हस्पिटलमा भेन्टिलेटरमा रहेकी ४३ वर्षीया एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बुटवल, रुपन्देहीवाट ती महिलालाई थप उपचारको लागि राजधानीको अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Reply #24 on: March 20, 2015, 02:02:37 PM »
मोहन बैद्य पत्नी एसएससी परीक्षा दिदै,महरा र शर्मा पत्नीको शिर झुक्यो
काठमाडौं । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यकी पत्नी सुष्मा वैद्यले आजदेखि सुरु भएको एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएकी छिन् । सानोमा पढाई गर्न नपाएकी सुष्माले माओवादी खुल्ला राजनीतमा आएदेखि पढ्ने मनसाय बनाएकी हुन् । ६ बर्षअघि देखि लगातार विद्यालय जान लागेकी ५८ वर्षीया सुष्मा बैद्य २०७१ को एसएससी परिक्षामा सहभागि भएकी छिन् ।
माओवादीहरु खुल्ला राजनीतिमा आएपछि नेता पत्नीहरु धमाधम विद्यालय जान थालेका थिए । बैद्य पत्नी सुष्मा, एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा र दीनानाथ शर्माकी पत्नी एक साथ बिद्यालय जान थालेका थिए । महरा र शर्मा पत्नीले पतिहरु मन्त्री भएपछि पढाई छाडेका थिए भने सुष्माले पढाईलाई निरन्तरता दिएकी थिइन ।
५२ वर्षको उमेरमा नयाँ बसपार्कस्थित प्रेरणा महिला विद्यालयमा भर्ना भएर औपचारिक शिक्षाको सुरुआत गरेकी बैद्य पत्नी सुष्माले यो एसएससी परिक्षा दिन लागेकी हुन् । विद्यालय जाने उमेर पुगेका तर लेखपढ गर्न नजान्ने महिलालाई पढाउन यो विद्यालय खोलिएको हो। विद्यालय भर्ना हुनुअघि सुष्मा सामान्य लेखपढ गर्नमात्र सक्थिन्।
‘स्कुलमा भर्ना हुनुअघि अरू कुनै पनि स्कुलमा भर्ना भएकी थिइनँ। नपढे पनि आफन्त र साथीभाइको संगतले पत्रिकाका अक्षर खुट्ट्याउन सक्ने भएकी थिएँ’ उनले भनिन्, ‘स्कुलमा नियमित पढ्न थालेपछि त मेहेनत गरियो भने गर्न नसक्ने केही पनि छैन रहेछ भन्ने आत्मविश्वास जागेको छ।’
उनी सुरुमा उक्त विद्यालयको कक्षा १ मा भर्ना भएकी थिइन्। त्यसपछि सिकाइको स्तर बढ्दै गएपछि सोही वर्ष विभिन्न तह पार गर्दै कक्षा ४ मा पुगिन्। विद्यालयले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर छुट्ट्याएर विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्छ। उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई एकै वर्षमा तीनचारवटा कक्षासम्मको बढोन्त्तरी हुन्छ ।
कक्षा १० सम्मको पढाइ पूरा गरेपछि सुष्मा एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुन लागेकी हुन्। अहिलेसम्म प्राप्त सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकन गर्दा एसएलसी पनि उत्तीर्ण हुनेमा उनी ढुक्क छिन्।
उनलाई पढाउन घरमा छोरी, ज्वाइँ, पति तथा अन्य आफन्तले सहयोग गरिरहेका छन्। ‘तीनवटी छोरीले स्नातकोत्तर पढिरहेका छन्। म भने परिवारकै सबैभन्दा कान्छो सदस्य बनेर एसएलसी दिन लागेकी छुु’ उनले भनिन् ।
प्रेरणा महिला विद्यालयबाट यसपटक ३३ जनाले एसएलसी परीक्षा दिँदैछन्। उनीहरू सबैको परीक्षा केन्द्र टोखामा रहेको मनोहर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा परेको छ। प्रेरणाजस्तै काठमाडौं तथा भक्तपुरमा रहेका अन्य महिला विद्यालयबाट पनि थुप्रै महिलाले यस वर्ष एसएलसी परीक्षा दिँदैछन्।
यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा पाँच लाख ७४ हजार ६ सय ८५ बिद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । जसमध्ये नियमिततर्फ चार लाख २६ हजार दुई सय १४ तथा एक्जाम्टेडतर्फ एक लाख ४५ हजार एक सय ८३ जनाले फाराम भरेका छन्।
« Reply #25 on: March 21, 2015, 04:15:29 AM »
HARRY POTTER writer .... JK Rowling in Nepal
« Reply #26 on: March 21, 2015, 10:44:10 PM »
'नानी, तिम्रो अनुहार डढाउने व्यक्ति पक्राउ पर्‍यो नि !'
काठमाडौं चैत ७ - राजधानीको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज अस्पतालको बर्न वार्डमा पल्टिएर एसएलसी दिइरहेकी तेजाबपीडित संगीता पुलामी मगर शुक्रबार सहयोगीलाई नेपाली विषयको ११ नम्बर प्रश्नको उत्तर टिपाउँदै थिइन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
संगीताकी आमाले भनिन्,‘भगवानले मेरो पुकारा सुने’
काठमाडौं,चैत ७ - एसिड आक्रमणमा परेर सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेकी संगीता पुलामी मगरकी आमा चमेलीले घटनाका दोषी पक्राउ परुन् भनेर आफूले दिनरात भगवानसित प्रार्थना गरेको र भगवानले आफ्नो पुकारा सुनेको बताएकी छन् । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
महिला कर्मचारी सात वर्षमा दोब्बर
काठमाडौं,चैत ७ - सात वर्षअघिसम्म निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति दर मुस्किलले आठ प्रतिशत मात्रै थियो । तर,हाल भने यो संख्या बढेर १७ दशमलब २९ प्रतिशत पुगेको छ । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाकै कारण निजामती सेवामा महिलाको संख्या दोब्बर भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
परीक्षा दिँदादिँदै छोरा पाइन् सीताले
बाजुरा, चैत ७ - बाजुराको स्वामिकार्तिक उच्च माविमा एसएलसी परीक्षा दिँदै गर्दा सीता धामीले छोरा पाएकी छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं चैत ७ - क्यान्सरको उपचारपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मोटाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मेलम्ची सुरुङ साह्रै सुस्त
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयमै बन्नेमा सम्बन्धित अधिकारीले नै आशंका ब्यक्त गर्न थालेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
मेडिकल माफिया र डा‍. केसीको जुहारी
काठमाडौ, चैत ७ - प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चिठी लेखेपछि सार्क सम्मेलनका बेला (मंसिर) मा रोकिएका डा गोविन्द केसी तिनै प्रधानमन्त्रीको अर्को चिठीको कारण आइतबारदेखि आमरण अनशनमा बस्दैछन् । सार्क सम्मेलनकै मौका पारेर अनशनको तयारी भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियामा रहेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल स्थगन गर्न चिठी लेखेका कारण केसी पछि हटेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
भीआईपीको विदेशमा उपचारमा अंकुश
काठमाडौ, चैत ७ - राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीसहितका मुलुकका कुनै पनि भीआईपी/भीभीआइपीले मुलुकमै निदान र उपचार हुन सक्ने खालको रोगका लागि राज्य कोषबाट रकम लिएर विदेश जान नपाउने भएका छन् । मुलुकमा उपचार र रोगको निदान हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र चिकित्सकहरुको एउटा स्वतन्त्र वोर्डले विदेश जानुपर्नेप्रमाणित गरी सिफारिस गरेको खण्डमा मात्र राज्यले विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई खर्च उपलब्ध गराउनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
बाहिर घोचपेच, भित्र छलफल
काठमाडौ, चैत ७ - एकीकृत माओवादीसहितको विपक्षी मोर्चा र सत्तापक्षबीच बाहिर घोचपेच जारी रहेपनि दोस्रो तहका नेताहरुबीच छलफल शुरु भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । सत्तापक्षले आन्दोलन स्थगित गर्न र विपक्षीले प्रक्रिया अघि नबढाउन गरेका दुवै विषय निष्कृय अवस्थामा भएको बेला यस्तो छलफल शुरु भएको हो ।
« Reply #27 on: March 22, 2015, 10:10:35 AM »
जङ्गलमा लागेको आगो बस्तीमा फैलिँदा
पाँचथर, चैत ८ - केही दिनअघिदेखि जङ्गलमा लागेको आगो बस्तीमा फैलिँदा रानीगाउँ–४ मा रु १५ लाख बराबरको क्षति भएको छ । स्थानीयवासी धनेश्वर गजुरेल तथा भवानीप्रसाद गजुरेलको घर र गोठ पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको तथा कृष्णबहादुर गजुरेलको एउटा गाई र बाछो जलेर मरेको स्थानीयवासी लक्ष्मण गजुरेलले जानकारी दिए । समयमै आगो नियन्त्रणमा लिन नसक्दा सो मूल्यबराबरको क्षति भएको हो । घटनास्थलमा अहिले पनि प्रहरी पुग्न नसकेका कारण गाउँले आगो नियन्त्रणको प्रयासमा जुटेको बताइएको छ । आगाले बस्तीका अन्य घर पनि भेट्न सक्ने भएकाले अहिले निभाउने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ ।
शान्ति मिसनमा फेरि तलब बढ्यो
काठमाडौं चैत ८ - संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा तैनाथ नेपाली सुरक्षाकर्मीको पारिश्रमिक फेरि बढाएको छ । गत साता राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले शान्तिमिसनमा कार्यरत फौजको तीन वर्षे सन २०१७ सम्मको पारिश्रमिक तालिका सार्वजनिक गर्दै मासिक तलब/भत्ता वृद्धि गरेको हो । काराेबार दैनिकमा समाचार छ ।
स्कुलमै खाइयो ५७ हजारको रक्सी
धनगढी चैत ८ - कैलालीको गदरियास्थित जनता उच्चमाविका प्रधानाध्यापकलगायत शिक्षकहरुले स्कुलमै ५७ हजारको रक्सी सेवन गरेको बिल लेखापरीक्षण पास गराएका छन् । २०६९ सालको लेखापरीक्षणमा रक्सी खाएको बिल पास भएको तथ्य अहिले विद्यालयका शिक्षक दुई समूहमा विभाजित भएपछि बाहिर आएको हो ।अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
अपराधको आर्जन १४ वर्षमा १५ करोड
काठमाडौं चैत ८ - नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक लेख्छ, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले मनराज गुरुङ, प्रमेश चौहानलाई पक्राउ गरेपछि १२ वर्ष पुरानो चर्चित रानीबारी हत्याकाण्डको रहस्य त सुल्झियो ।
किन ताेकिएन नयाँ मिति
काठमाडौं,चैत ८ - कार्यतालिकाअनुसार संविधान दिनुपर्ने ८ माघको मिति गुज्रेको झन्डै दुई महिना बितेको छ । तर,दलहरुले नयाँ मितिको राजनीतिक प्रतिवद्दतासमेत जनाउन सकेका छैनन् । मिति तोक्नेबारे प्रमुख दलहरुबीच नै मतभेद छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सम्पत्तिको लडाइँमा पूर्वराजपरिवार
काठमाडौं, चैत ८ - मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेकाले विभिन्न सरकारी निकायमा पदेन अध्यक्ष र संरक्षक छन् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला । तिनै एउटा हो, राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थित गर्न गठन गरिएको नेपाल ट्रस्टको संरक्षकको जिम्मेवारी । यही जिम्मेवारीका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्ध २५ माघमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट परेको छ । रिट दायर गरेकी हुन् पूर्वअधिराजकुमारी प्रणा राज्यलक्ष्मी सिंहले । नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकमा समाचार छ ।
स्वाइन फ्लुका कारण दैनिक ४ जना आईसीयुमा
काठमाडौं, चैत ८ - राजधानीका अस्पतालहरुमा दिनहुँ ४ जना स्वाइन फ्लुका संक्रमितहरु आईसीयु वा भेन्टिलेटरमा पठाइने गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
३० करोड अनियमितता
काठमाडौं चैत ८ - राजधानीको चाबहिलदेखि बाग्मती दोभानसम्मको धोबीखोला करिडोर सडक निमार्णमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अब बेलुनले बताउनेछ मौसम
काठमाडौं चैत ८ - जमिनमा राखिएका सामान्य उपकरण हेरेर मौसम भविष्यवाणी हुँदै आएको नेपालमा अब अत्याधुनिक वैज्ञानिक उच्च प्रविधिको राडार र बेलुनले बताउने भएको छ, मौसमका कुराहरु । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Reply #28 on: March 23, 2015, 09:45:52 AM »
रुपन्देही चैत ९ - लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटकीय प्रर्वछनका लागि गुरुयोजनाअन्तर्गत १४ किलोमिटर लामो सुरक्षा पखाएल परिवर्तन गरी ग्रेटवाल बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ । कोषका सदस्यसपचव अजितमान तामाङका अनुसार ग्रैटवाल संसारका सात आश्चर्यमध्ये गणना हुने चीनको ग्रेटवालजस्तै भब्य र विशाल हुनेछ ।
मेगा बैंकका प्रबन्धक ५ लाख धरौटीमा रिहा, २ जना जेल चलान
काठमाडौं, चैत ९ - मेगा बैंक ठगीका २ अभियुक्तलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । बैंकका प्रबन्धक शम्भु थापालाई भने ५ लाख धरौंटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं,चैत ९ - पश्चिम चितवनअन्तर्गत माडी नगरपालिकामा पर्ने सोमेश्वरगढीमा भारतीय सेना हतियारसहित प्रवेश गरी नेपालीलाई दुःख दिन थालेका छन् । सोमेश्वरगढीमा खुलेआम भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का जवान हतियारसहित प्रवेश गर्दासमेत नेपाली पक्ष मौन छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
दोहोरो सुविधामा रोक लगाइने
काठमाडौं, चैत ९ - सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी नियम बनाउने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बम हत्याका सुटर इन्टरपोलको सूचीमा
काठमाडौं, चैत ९ - सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई गोली हान्ने एक फरार अभियुक्तलाई इन्टरपोलले फरार सूचीमा राखेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एसएलसी अनुगमनका नाममा अवैध असुली
पाल्पा चैत ९ - जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाल्पाले एसएलसी परीक्षा स्ञ्चालनको नाममा विद्यालयबाट गैरकानुनी असुली गरेको खुलेको छ । शिक्षा कार्यालयले अनुगमनको नाममा ५० जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई एक हजार पाँच सय र ५० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुसँग दुई हजार रुपैयाँ उठाएको खुलेको हो ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एसिड छ्याप्ने जीवनविरुद्ध ज्यान मुद्धा
काठमाडौं चैत ९ - प्रहरीले संगीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एसिड प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका जीवन बिकविरुद्ध आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मुद्धा दर्ता गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
२० हजारमा नक्कली परीक्षार्थी
हेटौंडा, चैत्र ९ - सबिन रानामगरले काठमाडौंको बैश्नवी खुल्ला विद्यालयबाट एसएलसीको परीक्षा फारम भरे । उनकै नाममा शिक्षा कार्यालयले प्रवेश पत्र पनि जारी गर्‍यो । उनको परीक्षा केन्द्र काठमाडौंको बालुवाटार स्थित महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पर्‍यो । उनी जस्तै परीक्षा दिने पौने ६ लाख विद्यार्थी आफै परीक्षाको तयारी गर्दै थिए ।
माओवादी एकताका ७ आधार तय
काठमाडौं , चैत्र ९ - एमाओवादी र नेकपा-माओवादीबीच एकताका लागि गठित वार्ता कमिटीको पहिलो बैठकले छलफल अगाडि बढाउने ७ आधार तय गरेको छ । नेकपा-माओवादी केन्द्रीय कार्यालय, बुद्धनगरमा सम्पन्न बैठकले सैद्धान्तिक, राजनीतिक आधारहरू तयार गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Reply #29 on: March 24, 2015, 08:21:02 AM »
जबर्जस्ती किशोरीको विवाह गराएपछि
खोटाङ, चैत १० - खोटाङमा १ किशोरीलाई जबरजस्ती विवाह गराइदिने ३ महिला पक्राउ परेका छन्। बैंकुण्ठे-४ भोजपुरकी १५ वर्षीया बालिकालाई जालपा-९ का ५० वर्षीय भूमिराज राईसँग करकापले विवाह गराइदिएको भन्दै प्ररहीले जालपाकै चिजा राई, गायत्री राई र दुर्गासरी राईलाई पक्राउ गरेको आजको कारोबारमा खबर छापिएको छ।
प्रचण्ड, बाबुराम र वैद्यले टाउकोमा आगो सल्काउनुपर्छः थापा
प्रचण्ड, बाबुराम र वैद्यले टाउकोमा आगो सल्काउनुपर्छः थापा काठमाडौं, चैत १० - शान्ति प्रक्रिया विपरित सरकार अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पाँचवटा समूहमा विभाजित माओवादीहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीहरूले कार्यगत एकता गर्ने कि पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गृहकार्यमा जुटेका छन्,आजको नेपाल समाचार पत्रमा मधुसुदन रायामाझीले खबर लेखेका छन्।
कोरियाली भाषा परीक्षा जेठ अन्तिममा
कोरियाली भाषा परीक्षा जेठ अन्तिममा काठमाडौं, चैत १० - कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठ ३० र ३१ ग्ते सञ्चालन हुने भएको छ। सन् २०१६ मा काम गर्न दक्षिण कोरिया जानेका लागि भाषा परीक्षा लिन लागिएको हो। यसका लागि वैशाख ३ देखि ६ गतेसम्म आवेदन फारम बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले सोमबार यो निर्णय गरेको हो।
सदस्यसचिव बन्न मन्त्रीका कर्मचारी भर्ती
सदस्यसचिव बन्न मन्त्रीका कर्मचारी भर्ती काठमाडौं, चैत १० - शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवको दबाबमा तत्कालीन उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवको निमित्त जिम्मेवारी पाएका नारायण कोइरालाले नयाँ खुलेका सबै शाखामा मन्त्री र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी भर्ती गरेको खुलेको छ।
एसएलसी दिदै गरेका न्यू होराइजनका विद्यार्थी बेपत्ता
बुटवलको न्यु होराइजन बोर्डिङ स्कुलका एसएलसीका प्रतिभाशाली परीक्षार्थी सुदीप अधिकारी आइतबारदेखि बेपत्ता भएपछि अपहरणको आशंकामा प्रहरी र अभिभावकले खोजी अभियान तीव्र पारेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा महेन्द्र थापाले लेखेका छन्।
विप्लवको निगरानी गर्दै प्रहरी
विप्लवको निगरानी गर्दै प्रहरी काठमाडौं, चैत १० - नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा माओवादीको गतिविधिप्रति प्रहरी सजग बनेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको खबर अनुसार पछिल्ला गतिविधि कानुनसम्मत नदेखिएपछि प्रहरीले उनीहरुको गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डको पत्र
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डको पत्र काठमाडौं : - मुलुकमा संघीयता विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला यसबारे चिनियाँ नेताहरूसँग परामर्श गर्न एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोमबार अपराह्न चीन गएका छन्।दाहालले तीन महिनाअघि राज्य पुनर्संरचना अर्थात् संघीयताबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई लेखेको पत्रबारे त्यहाँ छलफल गर्ने स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आजको अन्नपूर्णमा रेवती सापकोटाले खबर लेखेका छन्।
‘कुरा सुन्नै चाहन्नन् कोइराला'
‘कुरा सुन्नै चाहन्नन् कोइराला' काठमाडौं, चैत १० - पाँचौंपटक अनशन बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका मागबारे सरकार ‘रहस्यमय ढंगले' मौन छ। दस दिनअघि नै अल्टिमेट दिएर अनशन सुरु गरेको दोस्रो दिन सोमबारसम्म सरकारले डा. केसीका मागबारे सामान्य चासोसमेत नदेखाएको खबर आजको नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन्।
कार्यविभाजनमा ओली-नेपालबीच किचलो
कार्यविभाजनमा ओली-नेपालबीच किचलो काठमाडौ, चैत १० - अध्यक्ष केपी ओली निकट व्यक्तिहरुलाई मात्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने ढंगले प्रस्ताव ल्याएको भन्दै माधव नेपाल समूहले आपत्ति जनाएपछि एमाले स्थायी समितिले सोमबार पनि पार्टी भित्रको कार्यविभाजनको टुंगो लगाउन नसकेको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
विश्वभरिका सांसदहरू नेपाल आउने
काठमाडौं, चैत १० - बालअधिकारका विभिन्न विषयमा सहकार्य गरी अघि बढ्न विश्वभरिका सांसदहरूको पहिलो बैठक शुक्रबार नेपालमा हुने भएको छ। विश्वभरिका सांसदहरू सहभागी 'पार्लियामेन्टरियन्स् विदाउट बोर्डर' अभियानको संयोजकत्वमा उक्त बैठक आयोजना हुने भएको हो।